Rop, gadzira manhamba ane mapoinzi muapp yevhiki | IPhone nhau
Pablo Aparicio | | IPhone maapplication, Kutengesa
Ino nguva, iyo app yevhiki iri zvekare mutambochii chitsva, handiti? Pachiitiko ichi, mutambo hausi iwo une mifananidzo inoyevedza, asi zvakapesana. Zvisinei, chinangwa che Rop, rinova ndiro zita remutambo wevhiki rino, haisi yekuda kutifadza nemaziso, asi kuti tiite kuti tifunge nezvenzira yekusvika padanho rinotevera. Dzidziso yekusvika padanho rinotevera iri nyore, asi hazvizove nyore kudaro, nditende.
MuPop tinofanirwa kuita zvinotevera: fambisa hexagoni, kana zvirinani tinovadaidza mapoinzi, kuti tambo ("rop" muChirungu, ndosaka zita remutambo) kuumba mufananidzo tine semuenzaniso. Ndine chokwadi chekuti urikufunga kuti zviri nyore, asi ndine chokwadiwo nekuti hauna kuzviedza. Zviite, pfuura mashoma matanho uye iwe uchandiudza.
Zvine musoro uye semuhuwandu hwakawanda hwemitambo, iwo matanho ekutanga akafanana nedzidziso. Izvo hazvisi kuti ndeye 100% dzidziso, kana zvisiri izvo zviri nyore kwazvo zvekuti inoshanda sekudzidzisa. Chinhu chekutanga chatinofanirwa kuita tambo yakatwasuka, chimwe chinhu chakapusa asi hachisi nyore kana pasina munhu atitsanangurira mutambo. Asi ini ndichakuudza: iwe unofanirwa kuisa zvibodzwa mumutsara wepakati kuti mutsetse upfuure kubva muchikamu uchienda kuchikamu. Mumatanho anotevera handichakubatsiri, zvinhu zviri kutomhanya zvega.
Sezvauri kuona mune iyo skrini, pachavewo nematanho umo isu tichafanirwa kuita maviri manhamba, uye iri rimwe rematanho ekutanga. Chinhu chakaomesesa ndechekuti hazvina kukwana kuisa chero poindi mune chero gomba, nekuti kana tikazviita zvisirizvo, tichagadzira zvimisikidzo zvisiri mumuenzaniso wekudhirowa. Isu tinofanirwa kuita kuti chimiro chive neicho chimiro chakaenzana seyemuenzaniso, hongu, tichifungidzira kuti iwo mapoinzi haapo.
Mutambo wacho wakanaka kuti utandare uye, sezvatinogara tichitaura, zvakakodzera kurodha pasi, uchiribatanidza neApple ID yedu uye tatova naro remangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Rop, gadzira maumbirwo ane madhi muapp yevhiki
DSCO ndicho chinhu chitsva kubva kune vanogadzira VSCO kugadzira yako GIFS